SHEEKOYINKA | Radio Wadani News
Home » SHEEKOYINKA
RadioWadani-Gabadh bakhaylad ah ayaa maalin lasoo martiyay, wiilkeeda ayey u yeedhay oo tidhi:Wiilkeygoow suuqa qabo marti igu qaali ah ayaa ii joogtee hilib inoo soo iibi, hilibka ugu wanaagsan inoo soo iibi, dabcan martidii hadalka wey maqashay! Cunugii suuqa ayuu tagay. saacad ka dib ayuu soo laabtay isagoo aan waxba soo iibin! Hooyadiis ayaa weydiisay meeyay hilibki? Wuxuu yidhi( Hiliblihi ...
Halkaan ka dhegayso barnaamijka galabnimo ee arimaha jaceylka ee wadani fm
DAADIYAHA :cabdikariin sheikh hussein yahye mr happy SOSAARE:cabdi nour osmaan aaden areys mr honest FARSAMADA:yahye abdulaahi abdullaahi Abaana
LA SOCO SHEKADA NIN ROON RAADISOOY RAFAAD U DANBEYA.
RWN. xamdi waa gabar ka soo jeda qoys ladan oo ilaahey isugu daray nimco aduun,waana gabar aad u qab weyn oo qurux alle ku maneeystay timo dhaadheer oo dhabarka joogo iyo midab cadaan oo ay u dhalatay leh.raga oo idil mar ay indhahu saaran kama jeestaan iyaga oo aan malabsan oo aan sii il raaracin,ma yara inta raga ee xamdi ...
halkaan ka dhageeyso barnamijka kulanka dhalinyarada warbahinta wadani
halkaan ka dhageeyso qeybta 2baad barnamijka kulanka dhalinyarada soo jeediye wariye cismaan aadan careys soo saraha ibraahim maxamed xasan farsamada cabdinuur cismaan aadan
Wiil iyo Gabar u dhexayn jiray jaceyl sheeko Gaaban
RADIO WADANI FM- Sheeko Qosol Badan. Wiil iyo Gabar ayaa waxa ka dhexayn jiray jaceyl aad u weyn iyo kalsooni sidatay kaftan aan caadi aheyn sida aad ogtihiinba markay 2 qof aad isugu wanaagsan yihiin wax yaalo badan ayaa dhexmara sida kaftan badan, farakacayaar iyo waliba kalsooni dheeraada taas oo marba marka kadanbaysa soo kordhaysa. Gabadha uu wiilka shukaansiga kala ...
Sheeko juxa iyo xarig
Juxaa iyo Xarig: radio wadani fm-Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Juxa hooyadii ku tiri:hooyo maanta waan Allah baryaya ee lacagtan qaadoo suuqii aad,waxaadna innooga soo iibisaa neef Ari ah? Juxa intuu suuqii tegay ayuu soo gaday neefkii Ariga ahaa kaddibna wuxuu isku dayay in uu soo qaado,dhib iyo rafaad badan kaddib ayuu keenay isaga oo neefkii sida. Hooyadii ayaa ...
Juxo iyo tuug sheeko qosol badan
WADANI FM-juxo oo dagan qolyar oo irid banaan ah xoolana ka haysta surwaal,shaati iyo joodari dhamaad ah ayaa tuug usoo dhacey, tuugii albaabka ayuu furey markuu waxkale waayey ayuu shaatigii iska qaatey, ninki juxa ahaa kama harine joodarigii ayuu ka daba qaatey. Suugii suu u ordayey markuu istaagey ayuu arkey juxa oo daba taagan.. Dabadeed juxa ayaa lahadlay ku dhahay:- ...
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Magaalo ka tirsan Jarmalka
U jeedka dowladda Somalia hubka farabadan uga dejisay Hobyo
Dagaal dhex-maray Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab
Puntland oo faah faahisay sababta ay u xireen Xafiisyadii ay furteen Wasiirada DFS
Guddiga diyaarinta Sharciga doorashooyinka oo gaaray Dhuusamareeb